Debian နှင့် Samba တို့ဖြင့် Active Directory server တစ်ခုတပ်ဆင်ပါ Linux မှ
သူတို့ဟာ Link ပါ | | ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဒီစီးရီးသင်တန်းများမှာ server တစ်ခုကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးသွားမယ် active Directory ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူကွန်ယက်များအတွက် Windows ကို အောက်မှာ debian (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဆာဗာတစ်ခုတည်ဆောက်မည်ဆိုပါကထင်းထင်းသင့်လျော်စွာလုပ်ပါလိမ့်မည်။ ) ဒီပထမအပိုင်းမှာဆာဗာရဲ့တပ်ဆင်မှုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုရှင်းပြပြီးဒုတိယမှာသုံးစွဲနည်းကိုသင်ပေးတယ် အဝေးမှအုပ်ချုပ်ရေးကိရိယာများ de Windows ကို7နှင့်ကွန်ပျူတာများကိုဒိုမိန်းသို့မည်သို့ချိတ်ဆက်ရမည် (Windows7ကိုယ်တိုင်နှင့် a) Windows XP ကို) ။ နောက်ပိုင်းမှာငါ GNU / Linux အသင်းများကိုဘယ်လိုစည်းလုံးညီညွှတ်ရမလဲဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတတိယအပိုင်းကိုငါလုပ်မယ်။ ဒါငါစမ်းသပ်ဖို့လိုသေးတယ်။
Microcomputer Equipment Repair Technician ၏သပိတ်မှောက်စဉ်ကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားမိသည် (ကျွန်ုပ်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ဖတ်သည့်အခါပေါ်မူတည်သည်။ ) ကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိခဲ့သည်။ Windows ကို 2008 (RC2 မဟုတ်) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အောက်တွင်ထပ်တူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မနိုင်ရှာဖွေခဲ့သည် GNU / Linux များ ရလဒ်ကတကယ်ကောင်းတယ်၊ ဆရာကတောင်ဆာဗာအမြန်နှုန်းကိုအံ့သြသွားတယ်။
ဆက်လက်မလုပ်ခင်၊ များစွာသော Active Directory ဆိုတာဘာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ၎င်းအသုံးအနှုန်းသည်ဆာဗာကဲ့သို့သောကွန်ယက်အုပ်ချုပ်မှုအတွက်ကိရိယာများကိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် DNS ကို, ကွန်ယက်အသုံးပြုသူများ၏အုပ်ချုပ်မှု, etc
debian တည်ငြိမ်သောဌာနခွဲတွင် (ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင်ဝီဇ 7.5 သည် XFCE နှင့် desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်သည်)
ဖောက်သည်တစ် ဦး Windows ကို7/ 8 / 8.1 ဝေးလံခေါင်သီသောဆာဗာထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတပ်ဆင်ရန်အထုပ်နှင့်အတူ (ဥပမာဆာဗာကိုစီမံရန်လိုအပ်သည် အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ folder တစ်ခုမျှဝေပါ) ။ ဒါကိုနောက်သင်ခန်းစာမှာရှင်းပြသွားမယ်။
1 သူတို့ကိုဘယ်လို activate လုပ်ရမယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက interfaces (၅) တွင်ကြည့်ပါ။
2 loopback ကွန်ယက်ကို interface
3.1 Samba ကို Install လုပ်ခြင်း 4
ဆက်မလုပ်မီ၊ ဖိုင်အချို့ကိုတည်းဖြတ်ရမည်၊ သို့မှသာအရာခပ်သိမ်းအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ကွန်ယက်ရှိကွန်ပျူတာများကဒိုမိန်းဆာဗာကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာကိုလိပ်စာပေးရန်ဖြစ်သည် Fixed IP။ ငါ၏အ Debian စမ်းသပ်ခြင်း၏အမှု၌ VirtualBox အသုံး ကွန်ယက်, အရာကအခြေစိုက်စခန်းကနေလာပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန် server ကိုငါကနေ configure Network မှ Manager ကိုဒါကြောင့်ငါကနှစ် ဦး စလုံးအတွက်ပြုသောအမှုဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့တည်းဖြတ်လိမ့်မယ်ပထမ ဦး ဆုံးဖိုင်ဖြစ်ပါတယ် / etc / network / interfaces.
သူတို့ကိုဘယ်လို activate လုပ်ရမယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက interfaces (၅) တွင်ကြည့်ပါ။
loopback ကွန်ယက်ကို interface
loopace inet iface lo
ငြိမ် inet iface eth0
dns- ဒိုမိန်း class.org
လိပ်စာ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ IP ။
ပိုက်ကွန်မျက်နှာဖုံး: ကွန်ယက်မျက်နှာဖုံး။ ကွန်ယက်သေးသေးလေးတစ်ခုသို့မဟုတ်အိမ်တွင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
တံခါးပေါက် တံခါးပေါက်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအင်တာနက်သို့ထွက်ခွာစေသည့် router ၏ IP ဖြစ်သည်။
dns-nameservers- ဆာဗာ ip DNS ကို။ ဤကိစ္စတွင်ဆာဗာ, သင်မူကား၊ အများပြည်သူဥပမာဒုတိယတစ်ခုကိုထည့်နိုင်သည် Google.
နောက်ဆုံး ၂ တွင်ဒိုမိန်းရှာဖွေရေးအမည်နှင့်ဒိုမိန်းအမည်ကိုဖော်ပြသည်။
ယခုအောက်ပါလိုင်းများကိုပေါင်းထည့်ရမည် / etc / hosts:
၎င်းကိုကွန်ယက်တွင်တွေ့နိုင်ရန်အတွက်ဒိုမိန်းအမည်ကိုဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ matrix ငါဆာဗာကိုပေးသောနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတွေ့ခဲ့သည့်အချို့သင်ခန်းစာများတွင်သူတို့ကအခြား nameserver line နှင့်နောက်ထပ်စုံတွဲတစ်တွဲထပ်ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်လိုင်းတစ်ခုသာလုံလောက်ခဲ့သည်။
ကွန်ယက်အိုင်ကွန်ပေါ်ရှိညာခလုပ်ခလုတ်ဖြင့် နှိပ်၍ ရွေးပါ ဆက်သွယ်မှုများကိုတည်းဖြတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီစဉ်ထားသောကွန်ယက်များကိုရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်းဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သာစိတ်ဝင်စားသည် ကြိုးမဲ့ကွန်ယက် 1 သို့မဟုတ်သင်အမည်ရှိသမျှ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ ၀ င်းဒိုးအသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည် IPv4 ဆက်တင်များ။ en နည်းလမ်း ငါတို့ရွေး လက်စွဲ။ ယခုကိုနှိပ်ပါ ပေါင်း လယ်ပြင်အားလုံးဖြည့်ပါ
ယခုငါတို့ tab ကိုသွားပါ ယေဘုယျ ပြီးတော့အဲဒါကိုမှတ်သားထားတယ် အသုံးပြုသူများအားလုံးသည်ဤကွန်ယက်သို့ဆက်သွယ်ရမည်။ ကိုနှိပ်ပါ ကယ်ဆယ် ပြီးတော့ငါတို့ထားခဲ့တယ်။
Samba ကို Install လုပ်ခြင်း 4
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Samba4ကို၎င်း၏စာမျက်နှာမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပြုစုမည်။ Debian တွင်၎င်းသည် repository မှသာရနိုင်သည်။ ကျောပိုးအိတ် ထိုသို့ငါ့ကိုမှီခိုပြproblemsနာများကိုပေး၏။
ငါတို့သွားမယ် http://samba.org နောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းကို download လုပ်ရန်နှင့်ဖိုင်တွဲတစ်ခုအတွင်းရှိအထုပ်ကို unzip လုပ်ရန်။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားသည့်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သောမူကွဲဖြစ်သည် 4.1.8 ဒါကြောင့်ငါတို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းကို compile လုပ်ရန်အတွက်အောက်ပါ package များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့် unzipped ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ terminal ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် folder ကိုရွှေ့နှင့်အောက်ပါ command များကို execute:
ပုံသေတပ်ဆင်ထားသည် / usr / local / samba။ ၎င်းသည် –prefix = / usr parameter ကိုထောက်ခံသည် NO ၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာ directory များထဲသို့ထည့်သွင်းသည် (ဥပမာ - binaries များမထည့်ပါ) / usr / bin)
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လမ်းကြောင်းသစ်များထည့်ပါ PATH။ ငါ့အမှု၌တည်၏ /etc/bash.bashrc root အပါအဝင်အသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လျှောက်ထားရန်။
Configure file ကိုရှာရန် Samba အတွက် / etc အတွင်းတွင် link တစ်ခုကိုလည်းဖန်တီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samba ဆာဗာကိုပြုပြင်မွမ်းမံတော့မည်။ ဒီဟာကိုငါတို့လုပ်သည်။
–Realm: domain name အပြည့်အစုံ
–Domain: ဒိုမိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်ရမယ် စာလုံးအကြီး
–Aminspass: network administrator ၏စကားဝှက်ဖြစ်သည်။
–Use-rfc2307: AC ကိုသက်ဝင်စေဖို့။
ချက်ချင်းပဲအရာရာတိုင်းအဆင်ပြေသွားရင် Samba ကသူ့ဟာသူ configure လုပ်မယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုသင်သိလိုလျှင်အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
ယခုငါတို့ဖိုင်တည်းဖြတ်သွားနေကြသည် /etc/samba/smb.conf။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောအချက်မှာ -
ဤလိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအင်တာနက်ကိုသုံးခွင့်ပေးသော DNS server ကိုညွှန်ပြရမည် (ဥပမာ - router) ။ Samba သည်ပုံမှန်ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းမှုကိုယူသည်။ သို့သော်၎င်းကိုအတည်ပြုရန်အကြံပြုသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်သည် -
အကယ်၍ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်မှုအမှားတစ်ခုပေးလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်အမှတ်၏အဆင့်များကိုစစ်ဆေးသည်။ Samba မှတ်တမ်းသည် /usr/local/samba/var/log.samba တွင်ရှိသည်
ယခုငါတို့ဖိုင်ကူးယူသွားနေကြသည် /usr/local/samba/private/krb5.confa/ etc။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကိုစစ်ဆေးတော့မည်။
ထိုအခါ၎င်းသည်အသုံးပြုသူ၏စကားဝှက် (ဤကိစ္စတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏) ကိုတောင်းလိမ့်မည် «သတိပေးချက် - မွန်ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်၊ ရက်ပေါင်း ၄၀ အတွင်းသင်၏စကားဝှက်သက်တမ်းကုန်သွားမည်။ » အဲဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်လာတာပါ။
ဒီတော့ဝေးသင်ခန်းစာ၏ပထမ ဦး ဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ ကျနော်တို့ကိုအောက်ပါတွင်ဖတ်ပါ။
ငါမှတ်ချက်များအတွက်ကအကြောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာမှတ်ချက်ပေးပေမယ့်ငါကဒီမှာထားတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တွင်လက်ရှိလိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့် (ကျွန်ုပ်တွင်အိမ်၌ကွန်ပျူတာတစ်လုံးသာရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်တန်းကာလအတွင်းတပ်ဆင်ထားသည်) နှင့်၎င်းသည် virtual machine များတွင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်မလွယ်ကူသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဗဟုသုတရှိသူနှင့်အဖွဲ့သည်၎င်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုပါက၎င်းတို့သည်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ )
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ » Debian နှင့် Samba တို့ဖြင့် Active Directory ဆာဗာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ပထမအပိုင်း
44 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Samba အစား SSH ကိုသုံးလို့ရသလား။
သူငယ်ချင်း။ ၀ င်းဒိုး XP လည်ပတ်မှုစနစ်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုမှအင်တာနက်ကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည့်အဆင့်ဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုကျွန်ုပ်ရှင်းပြနိုင်သလားလင်းနစ် ၀ န်ဆောင်မှုမှလိုင်းဆင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှအခိုင်အမာဆိုသည်။ SO Windows
Claudio Concepcion နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
SSH သည် GNU Linux ရှိကွန်ပျူတာများအကြားရှိ terminal မှတဆင့် session တစ်ခု (နှင့်ဖိုင်များနှင့် applications များလွှဲပြောင်းခြင်းကဲ့သို့) ကိုခွင့်ပြုသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ Samba နေစဉ်အဘယ်အရာကို Microsoft ၏ Active Directory စနစ်၏ GNU Linux ကိုများအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာပါဝငျသနေစဉ်။
သူလုပ်ခဲ့သည့် Son Link သည် GNU Linux တွင် domain controller ဖြစ်သည်။
Claudio Concepcion ကိုပြန်ပြောပါ
အလွန်ကောင်းသောကျူတို။ ငါလိုလူတွေအတွက်အရမ်းတော်တယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်။ အတည်ပြုသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်းမင်းရဲ့လမ်းညွှန်ကအရမ်းကောင်းတယ်။ ဒုတိယအပိုင်းကမင်းဒါကို ldap နဲ့လုပ်ထားတာလား။
အရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်, ငါဆက်လက်စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ^ _ ^
PS: ငါ / etc / network / interfaces configuration မှာ transcription error အနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်၊ dns-domain သွားသင့်တယ်လို့ငါထင်ရင် dns-domian ကပြောတယ်။
တညျ့။ ^^ သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါဒီဆောင်းပါးကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လေ့လာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်၌သာရှိနေခြင်း ဖြစ်၍ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတများစွာမရှိသောကြောင့် operating systems ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုသည်။
wilson ruiz သို့ပြန်သွားရန်
၎င်းသည် Debian တွင်မျှဝေထားသောဖိုင်တွဲများပြုလုပ်ရန်အသုံးဝင်ပါသလားသို့မဟုတ်အခြားသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုထိုရှုထောင့်မှသာသွားခြင်းလား။
Ubuntu ကို အခြေခံ၍ Resara Server ဟုခေါ်သော Linux ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုရှိပြီးဒိုမိန်းထိန်းချုပ်သူကိုတည်ဆောက်ရန်သီးသန့်အသုံးပြုသည်။ ငါကြိုးစား။ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကွန်ပျူတာများကိုထိုဒိုမိန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဤနေရာတွင်ထားခဲ့သနည်း။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒါကိုသုံးလိမ့်မယ်။ http://ostechnix.wordpress.com/2012/12/31/resara-server-an-alternative-opensource-linux-domain-controller-for-windows-active-directory-controller/
အိုး !!! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ ကျန်တာတွေကိုငါစောင့်နေမယ် Samba6နှင့် ldap ပါသော Debian3တွင် PDF တစ်ခုကိုကျွန်ုပ် install လုပ်သောအခါမှတ်မိပါသည်။ ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ .pol တင်းပလိတ်တွေကိုသုံးပြီးညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြင်ခဲ့တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ဤမူဝါဒများကိုမည်ကဲ့သို့အုပ်ချုပ်သနည်း။
အသုံးပြုသူနှင့်အုပ်စုလိုက်ပေါ်လစီများကို Windows 7/8 / 8.1 client မှဝေးလံခေါင်ဖျားထိန်းချုပ်မှုအထုပ်နှင့်ပြုလုပ်ရမည်။ နောက်အပိုင်းမှာငါရှင်းပြမယ်။ ငါရှာရန်မလိုဘဲထိုသို့ပြုမှတစ်လမ်းရှိမရှိကြည့်ဖို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြပေမယ့်ငါဘာမှမတှေ့ခဲ့, နှင့် Samba ဝီကီမှာကဤကဲ့သို့သောကပြောသည်ရုံ, အနည်းဆုံး Windows ကွန်ပျူတာများ, ဒါပေမယ့်ငါရှာနေဆက်လက် , ဒါကြောင့်ငါလာမယ့်အရစ်ကျ upload တင်ရန်ခဏယူပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
မာရီယို Guillermo Zavala ဆေးလ်ဗား ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက် ... ဒီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
Mario Guillermo Zavala Silva သို့ပြန်သွားပါ
ကောင်းတယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်…… ဘယ်အချိန်မှာဒုတိယအပိုင်း ??? သို့မဟုတ်သင်ဤလက်စွဲစာအုပ်ရှိပါကအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါကျေးဇူးပြုပြီး !! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ တစ်ပတ်လုံးလုံးငါအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး၊ စာသင်ခန်းနဲ့ပရောဂျက်ကြားမှာငါအလုပ်ရှုပ်နေတယ်။
အမှန်တရားကတော့ဒီအတိုင်းလုပ်ခဲ့တာ၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာဘာကိုမှနီးပါးမ ၀ င်ခဲ့ဘူး။ ငါအကြံပေးချင်တယ်၊ သင်ကကိရိယာတခုကိုအကြံပေးချင်တယ်၊ မင်းမသိဘူးလား၊ မသိဘူးလား၊ ငါကန့်သတ်ချက်ကိုမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် Active Directory server နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှပြသနာမရှိခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်ကောလိပ်တစ်ခုတက်ခဲ့တယ်။ ထိုပရိုဂရမ်ကိုထိုနည်းတူစွာခေါ်ဆိုသည်။ ၎င်းသည် Samba နှင့်သင်ပြုလုပ်သမျှနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သင်ဤမျှလောက်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းထက်ပိုသည်၊ အကျဉ်းချုံးထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်လိုအပ်သည်ကိုသင်ပြုပြင်နိုင်သည်။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး, ငါဒုတိယအရစ်ကျမျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ်။ Gnu / Linux ပါ ၀ င်သော "ခေတ်သစ်" တက်ကြွသော directory ကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုလေ့လာခြင်းကအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် NT4type active directory နှင့်တာရှည်စွာလုပ်ခဲ့တာကိုမှတ်မိပြီး၎င်းသည်အတုခိုး။ မရခြင်းမှာအလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Microsoft 2000 သည်သင်၏ LDAP ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို Windows XNUMX Server တွင်ပြောင်းလဲသောအခါ။
ငါသံသယ၏စုံတွဲတစ်တွဲ ... အတိအကျအဘို့အတက်ကြွ directory ကိုကဘာလဲ?
အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်သိသည့်အရာတစ်ခုကိုထပ်ဖြည့်နိုင်ပါက၎င်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်သည်။
ငါတွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားမှုရှိသည်၊ အနည်းငယ်ရှင်းပြရန်ကြည့်ပါ၊ ဤဖိုင်တွဲကို /etc/samba/smb.conf ဖိုင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကြည့်ပါ။
မှတ်ချက် = သီးသန့်ဖိုင်တွဲ
လမ်းကြောင်း = / နေအိမ် / ပုဂ္ဂလိက
သာဖတ်ပါ = ဟုတ်ကဲ့
browseable = ဟုတ်တယ်
ok ည့်သည် ok = မဟုတ်ဘူး
အများပြည်သူ = မ
စာရင်း = @ စီးပွားဖြစ်, @gestion ရေးပါ
တရားဝင်အသုံးပြုသူများ = @comercial, @gestion
mask = 0777 ကိုဖန်တီးပါ
directory ကိုမျက်နှာဖုံး = 0777
ယခုကျွန်ုပ်၏မေးမြန်းချက်အားလုံးအဆင်ပြေသွားသည်။ သို့သော်ကွန်ပြူတာမှ“ peercial” အသုံးပြုသူ“ comercial” အသုံးပြုသူနှင့်အခြားကွန်ပျူတာတစ်ခုမှ“ gestion” အဖွဲ့ ၀ င်“ coco” နှင့် log in လုပ်သောအခါ၊ ငါ pepe အသုံးပြုသူမှဖိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါဤလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်အခြားကွန်ပျူတာမှဖန်တီးထားသောဖိုင်ကိုငါ "coco" နှင့်ဖျက်လိုသောအခါအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အထူးအခွင့်အရေးများရှိသော်လည်းစာရေးသူကိုယ်တိုင်သင်ဤဖိုင်သို့မဟုတ်လမ်းညွှန်ကိုဖျက်နိုင်သည်။
chmod -R 777 / နေအိမ် / ပုဂ္ဂလိက
သူတို့ဟာတူညီတဲ့ LAN ကွန်ယက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်။
ငါ Distro Ubuntu ဆာဗာ 14.xx ကိုအသုံးပြုသည်
သတိပြုသင့်သည်မှာဤ PRIVATE ဖိုဒါကိုအသုံးပြုသူ ၂ ဦး (သို့) ထိုထက်ပိုသောအုပ်စုများမှအုပ်စုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အကြံဥာဏ်ပေးလိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ပျောက်ဆုံးနေသည်သို့မဟုတ်ချန်လှပ်ထားသည့်အရာတစ်ခုခုရှိပုံရသည်။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုဂရုပြုပါ။
စာရင်း = @comercial @gestion ရေးပါ
တရားဝင်အသုံးပြုသူများ = @comercial @gestion
Raul Baca Centeno ဟုသူကပြောသည်
Raúl Baca Centeno အားပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီ၊ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အခြေခံကိုမသိဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုအဖြေမရှိတဲ့မေးခွန်းတွေမေးပြီးပြီ။ ဒါကြောင့်ဒုတိယအပိုင်းကိုမလုပ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ အသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးပြီးလိုအပ်သောကိရိယာများမပါရှိပါ။ (ကျွန်ုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပြူတာသာရှိပြီး Virtual Machines နှင့်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီး၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ပစ်လေ့မရှိကြပါ)
ငါဒီအကြောင်းတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်အရအဲဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ အကယ်၍ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ၌ဗဟုသုတ ရှိ၍ ဒုတိယအပိုင်းကိုပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းပါက၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းယနေ့ခေတ်တွင်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်တွင်စက်တစ်ဝက်ခန့်ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့်ဒုတိယအပိုင်းကိုသင်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သင် folder တစ်ခုနှင့် dbf အများအပြားတွင် executable တစ်ခုရှိနိုင်မလားသိလိုသည်။ အများအပြားကွန်ပျူတာများမှဝင်ရောက်ဖို့စားပွဲ။
Raul baca ဟုသူကပြောသည်
Raul Baca သို့ပြန်သွားရန်
ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ ဒုတိယအပိုင်းကိုမင်းအားပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်၊ မင်းသူတို့ကိုဝေးလံခေါင်သီတဲ့ဆာဗာထိန်းချုပ်ရေးကိရိယာတွေကသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးစမ်းကြည့်ဖို့ပြောနိုင်မလား။
ဒံယလေက Bernal ဟုသူကပြောသည်
Daniel Bernal အားပြန်ကြားပါ
အလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ ဒုတိယအပိုင်းကိုမေးခွန်းတစ်ခုပဲ၊ ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဒီသင်ခန်းစာအဆုံးသတ်သွားပြီလား။
POSTSCRIPT: ကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတွင်ကျွန်ုပ်၏ VIRTUAL DEBIAN ကို၎င်းကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ်နှင့် VIRTUAL CLIENTS အုပ်စုကြီးများဖြင့် WIN7 နှင့် WIN8 နှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ပါ ၀ င်ရန်ကြိုးစားပါမည်။
ဤလမ်းညွှန်သည်မပြည့်စုံပါ၊ သင်လမ်းညွှန်များကိုသတ်မှတ်မထားပါ၊ အရာရာကိုကျပန်းချန်ထားခဲ့သည်၊
Ada မြို့ရိုး ဟုသူကပြောသည်
ဆာဗာတစ်ခုအား xp တစ်ခုနှင့်အဝေးမှချိတ်ဆက်နိုင်ရန် debian5တွင်မည်သို့ configure လုပ်ရမည်နည်း
ada tapia သို့ပြန်သွားပါ
root @ pdc: ~ # apt-get install-essential install -acac libacl1-dev libattr1-dev libblkid-dev \_ libgnutls-dev libreadline-dev python-dev libpam0g-dev \_ python-dnspyth gdb pkg-config libpopt-dev libldap2-dev dbsutils libbsd-dev attr krb5-user docbook-xsl libcups2 ac1
အထုပ်စာရင်းဖတ်နေသည် ... ပြီးပြီ
Package build-မရှိကိုမရရှိနိုင်သော်လည်းအခြား package တစ်ခုမှရည်ညွှန်းသည်။
ဆိုလိုသည်မှာအထုပ်သည်ပျောက်နေသည်၊ ခေတ်ကုန်သွားပြီ၊ သို့မဟုတ်ဖြစ်သည်
E: Package တည်ဆောက်မှု - မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတပ်ဆင်ရန်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းမရှိပါ
အဆိုပါ repositories ကို configured ကြသည်မဟုတ်
ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့မှတ်ချက်ထုတ်ဝေရန်မသွားကြသည်ကိုငါသိ၏။ ဆောင်းပါးသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်၊ ၎င်းကိုလိုအပ်ချက်များတွင်အသုံးပြုသောကြောင့် kerberos ကိုမည်သို့မည်ပုံတပ်ဆင်ထားသည်ကိုပြောစရာမလိုပါ။ Samba ကိုဘာကြောင့် compile လုပ်သလဲဗားရှင်း ၄ ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ သင်သတ်မှတ်ပြီးသောပြင်ဆင်မှုများကြောင့် Kinit သည်အမှားတစ်ခုကို NT_STATUS_DENIED ပေးသည်။ စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် - https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/samba-dc.html
ငါဒီဆောင်းပါး ၃ နှစ်ခွဲအကြာမှာငါထုတ်ဝေခဲ့တယ်၊ ငါလုပ်ခဲ့တုန်းက Samba3ဟာငါဆောင်းပါးမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း repositories ထဲမှာမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒါကိုစုစည်းရမယ်၊ အဆုံးငါကဆက်လက်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။ ငါကနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာသူတို့က (ဒီထက်ပိုပြီးအခြေခံကျတဲ့အရာဖြစ်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့ကိုဒီကိုထပ်သင်ပေးနေတယ်၊ ​​ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာ virtual machine တစ်ခုတည်း၌သာ၎င်းကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်စတင်ခဲ့သော်လည်းငါ့ကိုပြသနာကစတင်ပေးခဲ့သည်။ ပြောတာကအမှားကငါ့ကိုမပေးနိုင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုစပြီးမေးကြည့်တယ်။ A နှင့် link ကိုမျှဝေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Forks: Desktop Environment ကဘာလဲ။